Iityesi zeencwadi ziyolisa abantwana | Language Centre
Iityesi zeencwadi ziyolisa abantwana
Posted on 12/06/2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news
Kupapasho lokugqibela leDialogos, sachaza indlela iqebengwana elinebhurevosi esinganegalelo ngayo kwiphulo losetyenziso lweelwimi ezininzi. Ngoku sichaza umgama osele uhanjwe yiloo projekthi.
Ngomhla wama-20 kuEpreli, iVriende van Afrikaans, iZiko leeLwimi nendawo yokuhlala abafundi iAcademia bakuvuyela ukusa iityesi ezimbini zeencwadi eAkkerdoppies naseSpeelkring, izikolo ezimbini zabaqalayo zaseStellenbosch.
Ezo tyesi zixabisa i-R15 000 zizonke, zabakho ngenxa yeminikelo nemali eyayiphuma kwiprojekthi “Fill up with a boerewors roll and fill a book chest”, projekthi leyo yasungulwa ngomhla we-10 kuMatshi walo nyaka. Ngaloo projekthi, iVriende van Afrikaans, iZiko leeLwimi, umzi iAcademia nombutho iMatie Community Service babambisana ngenjongo yokuqokelela imali yokuthenga iityesi zeencwadi, bezithengela izikolo. Loo projekthi ikwayinxalenye yephulo leelwimi ezininzi lika-2017, phulo elo liqhutywa liZiko leeLwimi.
Yathi yakuvulwa ityesi eyayineencwadi ezingama-90, iimbuso zabantwana kwezo zikolo zimbini zabaqalayo zabonakala zikhazimla. UChareldine van der Merwe we-Vriende van Afrikaans wachazela abantwana indlela eyiyo yokuphatha iincwadi , waza emva koko wabafundela ibali. Kuzo zombini ezo zikolo abantwana babulela ngomyoli wona umculo weengoma ezimbini; becula bengathunywanga. I-Academia iza kwenza amalungiselelo okuba kuqaliswe iinkqubo zokufunda iincwadi kwezo zikolo kwakulo nyaka kwaye ikwaceba ukuzisa, phaya ekupheleni konyaka, iipakethana eziqulethe iintwanantwana ngenjongo yokwenza ukuba abantwana baxhamle umoya weKresmesi.
“Kuliwonga elingenambaliso ukufumana ithuba lokunika abantwana iincwadi. Siyathemba ukuba ubugqi obuqulethwe ziincwadi buyakwenza ukuba umntwana ngamnye athi nca ngazo”, uvakele esitsho uVernita Beukes, umququzeleli wale projekthi. Wona amazwi kaGqr Seuss ngenene avakala eyinyaniso nawo xa wayesithi: “Ungabufumana ubugqi naphina na apho ubufuna khona. Hlala nje phantsi uzole, kaloku uncedo lwakho lusencwadini!”
Language CentreArticles in isiXhosa Dialogos Recent newsIityesi zeencwadi ziyolisa abantwana